World Resorts	Nzuzo
Nzuzo gị dị ezigbo mkpa ka anyị. N'ihi ya, anyị mepụtara a iwu ịghọta otú anyị na-anakọta, na-eji, na-ekwurịta okwu na igosipụta na-eji ozi nkeonwe. Ndị na-esonụ obụk anyị na iwu nzuzo.
Tupu ma ọ bụ n'oge nke obon onye ọmụma, anyị ga-amata na nzube ya maka ihe nke ọmụma na-anakọtara.
Anyị ga-anakọta ma jiri ozi nkeonwe naanị iji mezuo ndị a na nzube kpọmkwem site anyị na ndị ọzọ dakọtara nzube, ma anyị na-enweta nkwenye nke onye nchegbu ma ọ bụ dị ka achọrọ site na iwu.
Anyị ga na-ejigide onye ọmụma dị ka ogologo oge dị mkpa iji mezuo ndị a ihe mgbaru ọsọ.
Anyị ga-anakọta ozi nkeonwe site iwu na-akwadoghị na ngosi n'aka na, ebe kwesịrị ekwesị, na ihe ọmụma ma ọ bụ nkwenye nke onye ahụ.
Personal data kwesịrị agbanwe agbanwe na nzube ya maka ihe nke ọ ga-eji na dị ka mkpa maka nzube ndị ahụ, kwesịrị ezi, zuru ezu na ugbu a.
Anyị ga-echebe onye ọmụma site ezi uche nche echebe megide ọnwụ ma ọ bụ na-ezu ohi nakwa dị ka n'enweghị ikike ohere, ngosi, Iṅomi, eji ma ọ bụ mgbanwe.
Anyị ga-eme dị ka ndị ahịa ihe ọmụma banyere iwu na omume anyị na-akọrọ management nke onye ozi.
Anyị na-eji-atọ ndị ọzọ mgbasa ozi na Meteodb.com na-akwado anyị na saịtị. Ụfọdụ n'ime ndị a-akpọsa ngwá ahịa nwere ike iji nkà na ụzụ dị ka kuki na mgbama weebụ (n'ihi na ihe atụ, Google iji Google AdSense). Ọ na-emekarị eji maka nzube nke geo-ezubere iche ma ọ bụ na-egosi ụfọdụ mgbasa ozi dabeere na kpọmkwem saịtị gara.
Anyị na-agba mbọ iji na-eduzi anyị azụmahịa dị na ụkpụrụ ndị a iji hụ na confidentiality nke onye ozi na-echebe ma na nọgidere na-enwe.
Okwu nke Jiri Nzuzo Ndi ana-akpo 2020 Meteodb.com. Weather on ntụrụndụ maka ọnwa, mmiri okpomọkụ, ego nke ọdịda. Chọpụta ebe izu ike na ebe ugbu a oge. Page load 0.0715 s. ▲